Filtrer les éléments par date : jeudi, 23 août 2018
jeudi, 23 août 2018 19:13
Rallye du Boeny: Tanterahina manomboka anio eto Mahajanga ny andiany faha-13
Mifampitaona eto Mahajanga mandritra ny telo andro ny mpitia ny taranja rallye, mifampikatroka amin'ny 13ème rallye du Boeny amin'ny dingana faha efatra amin'ny fifanitsanana iadiana ny tompondakan'i Madagasikara.
Fiara miisa 30 no mifaninana, ary miandahy miambavy ireo mpandray anjara.
Tamin'ny 1 ora sy sasany tolakandro teo ny fiaingana nanoloana ny Lapan'ny Tanànan'i Mahajanga.
Ankafizin'ireo mpandray anjara ny circuit eto Mahajanga ka izay no nahamaro ireo tonga taty an-toerana.
Karazana fiara samihafa no entin'ireo mpandray anjara mifaninana amin'ity 13ème rallye du Boeny 2018 ity.
jeudi, 23 août 2018 17:22
Tsingin'i Bemaraha: Midi-potsiny ireo vazaha mpizahatany
Tapitra omaly alarobia ny 72 ora, nomen'ireo kaominina manodidina ity valan-javaboary arovana, ho an'ny Madagascar National Parks ity, izay mitantana azy io nanomboka ny taona 1997, hifampiresahana hikaroham-bahaolana amin'ireo eny ifotony nefa tsy nisy.
Roso amin'ny dingana vaovao ireo vahoaka, ka taorian'ny sakana nataon'izy ireo tamin'ny zoma 17 aogositra, tamin'ireo circuits efatra ahafahana mitsidika ny Tsingin'i Bemaraha, dia nosakanan'izy ireo indray tamin'ity androany ity ny fivarotana tapakila fidirana teto Bekopaka sy Morondava ary dia nidi-potsiny avokoa ireo vazaha mpizahatany tonga teto niaraka tamin'ireo mpiseradia.
Anaovana asa sosialy ho an'ireo Kaominina misy ny valanjavaboary ny 50%-n'ny saram-pidirana, mitaraina ho tsy misitraka izany anefa ireo mpahazo tombontsoa ka nanao izao hetsika izao.
jeudi, 23 août 2018 11:40
Fifidianana: Manohana an'iza i Patrick Raharimanana?
Betsaka ny mametraka izay fanontaniana izay, misy mihitsy aza no milaza fa hanohana kandida zatsy na zaroa no antony tsy nilatsahany.
Tsy hiverenako intsony satria efa nazavaiko ny antony tsy nilatsahako.
Raha ny hoe hanohana Kandida, dia hatreto tsy misy Kandida tohanako, na tohanan'ny Antoko "Vitantsika io".
Izaho manokana kosa dia hijoro hiady amin'ny kolikoly momba ny fifidianana, tsy hoe manenjika an'iza na iza izany, fa ny halabato, ny kolikoly, ny fampihesonana vahoaka no iadiako, ka izay fanazavana hampisokatra ny mason'ny mpifidy no ezahiko atao, ka izay voadona dia voadona, satria izy no te tsy hanara-dalàna.
jeudi, 23 août 2018 11:37
Fianarantsoa: Fanamafisana ny fandriam-pahalemana isam-pokontany
Namory ny tompon'andraikitra ifotony ny fiadidiana ny Kaominina eto Fianarantsoa, mba ho fametrahana ny fikambanana SOAMIRAY. Herintaona nisiana io vovonana nipoitra tany amin'ny Distrikan'Ambalavao io.
Dahalo 7 no lavo nandritra ny fiaraha-mientana mba ho fikarohana ny mahavanon-dratsy. Omby 205 no tafaverina amin'ny tompony.
Mametraka ny ratsamangaika eto amin'ny Kaominina renivohitr'i Fianarantsoa ny fikambanana, izay tarihin'ny Ben'ny Tananan'Iarintsena. Voadinika mandritra izao fotoana izao ny tetikady isam-pokontany ho famongorana ny asan-dahalo sy asan-jiolahy isan-karazany.
jeudi, 23 août 2018 11:28
Sambava: Manjaka ny ady tany
Endrika iray nisehoan'izany ny teto Menagisy-Sambava. Ny alarobia 22 aogositra vao tamin’ny 5ora sy 30 maraina dia efa niatrana ireo mpitandro filaminana mba hisoroka izay mety hiseho, nandritra ny fandrodana ireo trano izay tafiditra amin’ny tany manan-tompo.
Nanoritra mazava tsara ilay tompon’ilay tany, izay teratany Sinoa fa tany manan-tompo ary efa mifefy ara-dalana io, nefa ataon’ireo olom-bitsy fitadiavam-bola ka ampidiran’izy ireo olona hanorina trano. Efa nomena fe-potoana herinandro ireo olona ireo, hoy ilay Sinoa mba samy hanala ny azy fa “tsy nisy taitra ka tsy maintsy niafara tamin izao izahay”.
Nangataka kosa ny mpitandro filaminana mba tsy ho potehina ny fitaovana mba hahafahana mamadika azy ho ampiasaina amin’ny lakozian’ny miaramila.
jeudi, 23 août 2018 11:08
Fianarantsoa: Niakatra ny taham-pahafahana CEPE
72,33% ny taham-pahafahana fanadinana CEPE eto amin'ny fari-piadidiam-pampianarana Fianarantsoa tamin'ity taona ity. Niakatra 2% izany raha mitaha ny vokatra azo tamin'ny herintaona.
67% kosa izany vokatra izany ao Isandra. Mitontaly 2002 ireo mpianatra afa-panadinana ireo. 485 kosa no isan'ny mpianatra tsy tonga nanatrika ny fanadinana ny andron'ny 14 aogositra lasa teo.
Ho an'ny Cisco Lalangina dia 71,97% n'ny mpianatra 4.592 no afa-panadinana.
jeudi, 23 août 2018 10:45
Michel Saint-Lot: Nouveau Représentant de l'UNICEF à Madagascar
Le nouveau Représentant de l’UNICEF à Madagascar prend le relais de l’UNICEF à un moment où Madagascar va organiser ses élections présidentielles.
Durant ces cinq dernières années, les interventions de l’UNICEF ont pu toucher les enfants dans tout le pays, avec un focus additionnel sur 9 régions cibles et sur la réponse aux enfants touchés par les crises humanitaires, en particulier dans le sud, mais aussi lors des cyclones ou épidémies.
jeudi, 23 août 2018 10:42
Cisco Antananarivo Renivohitra: Nitombo 18% ny taham-pahafahana fanadinana CEPE
73,61 % ny tahan'ny fahafaham-panadinana CEPE teto amin'ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra tamin’ity taona 2018 ity, araka ny tatitry ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, raha toa ka 56,26% izany ny taona 2017. Nahitana fiakarany 18% mihoatran'ny tamin'ny taon-dasa.
jeudi, 23 août 2018 10:18
Sambava: Nanao atrikasa ireo Mpimasy, Mpanompo tromba, raokandro … manerana an’i SAVA
Entina hanatsarana ny fomba fiasa, indrindra amin’ny fanarahan-dalana mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana ny anton’ity atrik’asa ity, izay notanterahina tao amin'ny efitrano malalaky ny Faritra SAVA, ny 21 aogositra 2018. Miisa 94 izy ireo manerana ny Faritra SAVA, mandray anjara amin’ity atrik’asa ity.
Nitarika ny fiofanana izao ny filoha nasionalin’ny mpitsabo nentim-paharazana, Andrianandrainarivo Josephin Rasamivelona. Tonga nanome voninahitra izany ny avy amin’ny Préfecture sy ny avy amin’ny fahasalamam-bahoaka.
jeudi, 23 août 2018 09:55
Antsiranana: Manohitra ny fametrahana DREN vaovao ny mpampianatra
Nidina an-dalambe nilanja sorabaventy ireo mpampianatra mpanabe, nanehoan’izy ireo ny fanoherany ny fametrahana ny Talem-paritry ny fanabeazana vaovao aty amin’ny faritra DIANA.